Xanta cusub ayaa tilmaameysa in gaariga Apple uu imaan karo isteerinka la'aantiisa | Waxaan ka socdaa mac
Markii aad aragto sawir la mid ah kan ku yaal bilowga maqaalkan, waxaad isla markiiba ka fikireysaa gaari. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa u maleynaya in gaariga Apple-ka ay u badan tahay inuu yimaado isagoon lahayn isteerinka. Su'aasha isla markiiba soo baxda ayaa ah Waa kuma qofka baabuurka wada? Jawaabtu waa mid fudud oo dhib badan: Gaariga laftiisa. Waxaa la filayaa, sida ay sheegayaan wararka / xanta cusub, in ay si buuxda u madaxbannaan tahay.
Warbixinno cusub ama warar cusub ayaa tilmaamaya in gaariga xiga ee ay sameysay Apple ay aad ugu dhowdahay inuu noqdo mid iskiis u madax bannaan. Sababtaas awgeed, waa wax aad u fudud in la iibiyo iyada oo aan la wadin isteerinka. Macluumaadkan cusub wuxuu ka yimid falanqeeye Morgan Stanley Gawaarida & Dhaqdhaqaaqa Wadaagga, Adam Jones. Wuxuu la wadaagay xoogaa feker ah oo ku saabsan saamaynta soo gelitaanka Apple ee suuqa baabuurta, oo ay ku jirto suurtagalnimada astaamaha gaariga oo si buuxda u madax bannaan.
Waxaan si dhib yar u qiyaasi karnaa Apple inay soo galayso suuqa baabuurta oo ay la socoto nashqad gaari oo ku lug leh faragelinta aadanaha ee habka wadista. Waa fikradeena, laakiin gaariga Apple oo isteerinka wata waa sida iPhone oo leh badhannada jirka iyo xadhig caag ah oo isku duuban oo ku dhegan gidaarka. Haddii aan sax nahay, markaa tani waxay runtii kor u qaadi kartaa qadarinta maalgashadayaasha.
Ma garanayno in hadaladani ay yihiin natiijada daraasad taxaddar leh ama ay tahay uun qaab soo jiidasho leh. Waxaan ka fekeri karaa kun sababood oo jiritaanka isteerinka loo baahan yahay. Darawalku waa inuu lahaadaa wax yar oo dhaqdhaqaaq ah si uu awood ugu yeesho inuu la wareego gaariga haddii ay dhacdo baahi. In kasta oo ay run tahay in Apple ay awood u leedahay inay bilowdo warkan oo ay sii ahaato sidii wax aan jirin. Kadibna waxay bilaabi lahaayeen Apple Car 2.0 oo isteerinka lagu dari lahaa. Xitaa waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin qalab ama sida qalab cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Xanta cusubi waxay muujineysaa in gaariga Apple uu imaan karo isteerin la'aan
Nooca kama dambeysta ah ee 'Big Sur Sur', cilladda amniga iyo wax badan oo dheeri ah. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac